Valladolid dia namporisika ny hampiasa ny bisikileta noho ny loto be | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | | General, About us
Ny fahalotoan'ny rivotra iainan'ny tanàna dia mitaky ny andrim-panjakana mandray fepetra hanatsarana ny kalitaon'ny rivotra. Ny ankamaroan'ny loto ao amin'ny tanàna lehibe dia vokatry ny fitaterana sy ny fivezivezena. Any afovoan-tanàna dia matetika misy fitohanan'ny fifamoivoizana, fitohanana ary fiara maro be mivezivezy miaraka (ny ankamaroan'izy ireo dia mpandeha iray monja).
Izany no antony mahatonga ny filankevitry ny tanànan'i Valladolid dia nanentana ireo mpifanolo-bodirindrina aminy hampiasa fitateram-bahoaka bebe kokoa na hampiasa ny bisikileta handeha hiasa na ho an'ny fivezivezeny isan'andro. Izany dia vokatry ny rakitsoratry ny fizotranà fandotoana rivotra avo be noho ny fitomboan'ny diôzida azota. Hiasa bebe kokoa ve ny hoe mitaingina bisikileta ny olom-pirenena?
1 Firaketana ny fizarana fandotoana be
2 Ny fandotoana dia kasaina hitombo
Firaketana ny fizarana fandotoana be
Rehefa voasoratra ao amin'ny tanàna ny andiam-fandotoana be dia be dia manomboka ny fepetra hamahana ny olana ary ankoatr'izay dia ambara ny fepetra fisorohana hisorohana ny fizarana avo tahaka izany tsy hitranga intsony. Omaly tao Valladolid dia tratra manoratra micrograms 187 isaky ny metatra toratelo eo amin'ny gara Arco Ladrillo, amin'ny 20.00 ora alina ny ora masoandro; Na dia tsy mihoatra ny tokonam-baravaran'ny kalitaon'ny rivotra aza izy ireo 200 micrograms, dia mitaky toe-javatra fisorohana izy ireo.
Ny fatran'ny fandotoana be eny amin'ny habakabaka ary ateraky ny fofonain'ny olom-pirenena dia afaka mampitombo ny isan'ny aretim-panafody sy ny tranga asma.
Ny fandotoana dia kasaina hitombo
Noho ny fanenjehana «anticyclones» izay mitranga dia ambany kokoa ny fanaparitahana ny fandotoana ao an-tanàna. Izany no antony mitombo hatrany ny fifantohana ary antenaina hitombo bebe kokoa aza. Mba hamoahana mialoha io fiakarana mety hihoatra io, izay mihoatra ny 200 micrograms isaky ny metatra toratelo metatra, dia nanentana ny olom-pirenena hampiasa fitateram-bahoaka na bisikileta ny filankevitry ny tanàna.
Amin'ity toe-javatra ity izay mitombo ny loto, hiteraka famerana ny fifamoivoizana any amin'ny faritra manan-tantara ao an-tanàna izany. Notsiahivin'ny City Council fa ny azota diôzida dia mety miteraka fihetsika mamaivay ao amin'ny havokavoka sy ny fiasan'ny asthmatic.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » General » Valladolid dia namporisika ny hampiasa ny bisikileta noho ny loto be